Izinyathelo Eziyi-10 Zokuya Kwinsizakalo Yemakhasimende Ekhanyayo | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 6, 2013 NgoLwesibili, Agasti 6, 2013 Douglas Karr
Sibhale nge- ukukhula kwenkonzo yamakhasimende ezenhlalo esikhathini esedlule, futhi siyaqhubeka nokuqhubekisela amaklayenti ethu kulolo hlangothi. Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende kwezenhlalo kulindelwe amakhasimende akho futhi kuyithuba elihle lemizamo yakho yokumaketha. Yini engcono kunokusiza ikhasimende ekukhanyeni komphakathi lapho wonke umuntu ezobona ukuthi uyinkampani enkulu kangakanani?
Inani labantu abahlanganyela ezingxoxweni eziku-inthanethi ngemikhiqizo liyakhula unyaka nonyaka. Cishe i-50% yabo bonke abasebenzisi bezindaba zenhlalo basebenzise izinsizakalo zamakhasimende ezenhlalo, kufaka phakathi cishe ingxenye yesithathu yalabo abaneminyaka engaphezu kwengama-65. Ngeshwa, imiphumela kuze kube manje ishiya okuningi okulangazekayo. Kuphela ngama-36% wabathengi abenza ukubuza kwamakhasimende ngemibiko yezokuxhumana ukuthi inkinga yabo ixazululwe ngokushesha nangempumelelo.
Lokhu infographic kusuka Amamethrikhi we-Sentiment, iyimephu yomgwaqo enemininingwane ephelele yanoma iyiphi inkampani efuna ukusebenzisa noma ukuthuthukisa ukusebenzela amakhasimende abo kwezenhlalo.
Tags: Insizakalo yekhasimendeukwesekwa kwamakhasimendeinsizakalo yamakhasimende omphakathiukwesekwa komphakathiukweseka